Yaa Guuleystay Iiraan iyo Mareykanka | Xaqiiqonews
Yaa Guuleystay Iiraan iyo Mareykanka
Yaa guulestay Iiraan iyo Mareykanka waa su’aal jawaabteeda ay ku xirantahay talaabada xigta ee ay qaadaan Iiraan iyo Mareykanka iyo wixii ka dhasha.
Inkastoo Iiraan ay khasaaro weyn ka soo gaartay dilkii hogaamiye Suleymaanii, haddana xaaladda waqtigan gaaban waxa ay u muuqataa in Iiraan ay dhoosha ka qosleyso.
Dilkii Suleymaani iyo isku soo bixitaankii aasitaankiisa, waxa ay Iiraan ku guuleysatay in dadweynuhu indhahooda ka soo weeciso dibadbaxyadii iyo cabashooyinkii ka dhanka ahaa nidaamka kacaanka Iiraan.
Iiraan ayaa la daala dhaceyso dhaqaale xumo tan iyo markii Trump uu cusbooneysiiyey cunaqabateynii Iiraan saarneyd 2018.
Laakiin Iiraan hadii ay sameyso duqeymo dheeri oo ka dhan ah Mareykanka taasi waxa ay Iiraan ka dhigi kartaa Mid khasaarto, Madaama Mareykanka uu ka awood badanyahay Iiraan marka la fiiriyo Milatari ahaan.
Mareykanka ilaa hadda waxa uu u muuqdaa garabka weyn, ciqaabta ugu badan ee Mareykanka laga filnaayana waxa ay tahay “Cunaqabateyn”.
Hase yeeshee dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee Iiraan ayaa Mareykanka gaarsiiyey fariimo ku filan si uu ogaado qaabka loola dhaqmi lahaa waddan sida Iiraan oo kale ah kaasi oo khasaare badan gaarsiin kara mid ka mid ah wadamada aduunka ugu xoogga badan.